ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation တိုက်ရိုက်၏ bulk China Manufacturer
Active ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ Include,ရေကျောက် Zoster ဗိုင်းရပ်စ်နထေိုငျ,Oka strain အမျိုးအနွယ်
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Asia ထုတ်ကုန်: 1% - 10% Cert: GMP ဖေါ်ပြချက်: Active ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ Include,ရေကျောက် Zoster ဗိုင်းရပ်စ်နထေိုငျ,Oka strain အမျိုးအနွယ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး (တိုက်ရိုက်) > ဗိုလ်လုပွဲအစုလိုက် > ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation တိုက်ရိုက်၏ bulk
 ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation တိုက်ရိုက်၏ bulk
ရမှာပေါ့ကာကွယ်ဆေးအတွက်  အနိမ့် titer ၏ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါမြင့်မား titer ကာကွယ်ဆေးနီးပါး 75% အားဖြင့်အောင်မြင်မှုများဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
BCHT ကနေရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအပေါငျးတို့သဖြန့်ချိအသုတ်, အ titers အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအမျိုးသား Institutes အားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး 10000 PFU / ထိုးထက်မနည်းရှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအကမ္ဘာပေါ်မှာသက်တမ်းကာလ၏ 36 လကြာအတူရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
ကိုယ်ပိုင် IP ကိုအခွင့်အရေးများနှင့်အတူ BH-2 stabilizer (တရုတ်မူပိုင်ခွင့်အဘယ်သူမျှမပေးသနား .: ZL200910138411.6 နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာအဘယ်သူမျှမ .: ရာခိုင်နှုန်း / CN2009 / 001405) ချမှတ်အလွန်ထုတ်ကုန်များ၏တည်ငြိမ်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်သိုလှောင်မှုအောက်တွင် 36 လအတွင်းများအတွက်တရားဝင်မှုကာလသေချာ အခွအေနေ။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: Active ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ Include , ရေကျောက် Zoster ဗိုင်းရပ်စ်နထေိုငျ , Oka strain အမျိုးအနွယ် , မလှုပ်မရှားပါဝင်ပစ္စည်းများ Include , အဆိုပါကာကွယ်ဆေးတစ်အရည်အဘိတ် Is , Bioproducts Semifinished ကုန်ပစ္စည်းများဆေးပညာ , ရေကျောက်ကုန်ပစ္စည်းများ Bioproducts Finished , gelatin အခမဲ့ကုန်ပစ္စည်းများဆေးပညာ Finished